ပထမအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမအထူးအစည်းအဝေးကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း posted | 07.05.2013 ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမအထူးအစည်းအ‌ဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအ‌ဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက် (တနင်္လာနေ့) ၁၀:ဝဝ နာရီအချိန်တွင် စတင်
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြညိမ်းအား UN Assistant Secretary General နှင့် UNDP Assistant and Director, Regional Bureau of Asia and the Pacific ဖြစ်သူ Mr.Ajay Chhibber ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဧပြီလ ၈ ရက်မွန်းလွဲ ၃:၃၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကော်မတီဆောင်အမှတ် (၂၀)တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြညိမ်းအား UN Assistant Secretary General နှင့် UNDP Assistant and Director ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်သည် သြစတြေးလျ ဥပဒေပြု အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဆီနိတ်တာ Hon. John Joseph Hogg ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဧည့်ခံမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်များအား တွေ့ဆုံခြင်း
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြညိမ်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီနှင့် အမျိုးသားစီမံကိန်းရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မြင့်ဖေ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်ထူးနှင့် လွှတ်တော်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ တွေ့ဆုံရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပိုမိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍရပ်များတွင် ပိုမိုမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် မြန်မာ့လွှတ်တော်၏အရေ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့် တရုတ်နိုင်ငံ အာရှရေးရာဌာနမှ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာ ဌာနမှ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E.
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့် ကုလသမဂ္ဂ အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် သည် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၊ ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုများရုံး၊ ကုလသမဂ္ဂ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်တို့မှ Ms. Merete Dyrud ခေါင်းဆောင်သည့် အမှုဆောင်ဘုတ် အဖွဲ့ဝင်များအား ယနေ့ညနေ ၄နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အထူးသံတမန်ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် သည် ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးသံတမန်နှင့် ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇/၂၀၁၅) ထုတ်ပြန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးနှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများ စိစစ်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်လိုက်သည်။
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့အစီအစဉ်ကျင်းပ
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ကို အစီအစဉ် (၆) ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။